နှစ်တိုင်း၊ Saxo ဘဏ်သည် "ငန်းနက်များ" (တကယ်သာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါက သိသာသော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည့် အလွန်အမင်း မဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ရပ်များ) စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပေးပါသည်။ ဤခန့်မှန်းချက်များသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ အာရုံကို ဖမ်းစားပြီး၊ သူတို့ဗျူဟာတွေကို စီစဉ်သည့်အခါ ပုံမှန်ထဲကခွဲထွက်ပြီး စိတ်ကူးသစ်များကိုတွေးတောရန် ကူညီပေးပါသည်။ ဥပမာ၊ ၂၀၁၈ ခန့်မှန်းချက်တွင် Saxo ဘဏ်သည် Bitcoin ကျဆုံးမှုကို ကြိုမြင်ခဲ့သည်။၂၀၁၉မှ ယူဆောင်လာမည့် မခံမရပ်နိုင်သော စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များက ဘာလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
#အထိ ငွေရေးကြေးရေး ဇာတာခွင်ဟောကိန်း
၂၀၁၉အတွက် ငွေကြေးဇာတာခွင်ကို ဆန်းစစ်ပါ! ကန့်လန်ကာနောက်ကွယ်ကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး၊ ဘယ်ဂြိုလ်သားစွမ်းအားက သင့်အတွက်ပြင်ထားလဲကြည့်လိုက်ပါ
၂၀၁၉မှာ သင့်ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ? ပိုကောင်းအောင် ဘာလုပ်နိုင်မလဲ? ဂြိုလ်များမှ အဖြေပေးပြီးပါပြီ။ သင့်ငွေကြေးချင့်ချိန်မှုအတွက် လာမည့်နှစ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
သင့်ကိုယ်သင် Forex ဂုရုလို့ခေါ်နိုင်ပါသလား? စစ်ကြည့်ရအောင်! ဖြေဆိုကြည့်ပြီး၊ Forex အကြောင်း စိတ်ဝင်စားပြီး ထူးခြားဖွယ်အချက်များ သင်ဘယ်လောက်သိလဲ ရှာဖွေပါ
သင်သည် သန်းကြွယ်သူဌေးတစ်ဦးဖြစ်မှသာလျှင် ဖိတ်ကြားခံရမည့် အထင်ကရပွဲများ
ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ ကုန်ကျသည့် လက်မှတ်များဝယ်ရသည့် ဈေးအဆမတန်ကြီးသည့်ပွဲမြောက်များစွာရှိသည်။ သို့သော် တစ်ချို့အနေအထားတွင် ငွေသည်သင့်အား အထဲဝင်လို့ရအောင်အခွင့်အရေး ဝယ်မပေးနိုင်ပါ။ သင်သည် သန်းကြွယ်သူဌေးအခြေအနေဖြစ်မှသာလျှင် ဖိတ်ကြားခံရမည့် ဆန်းပြားသောပွဲများကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
အားအကြီးဆုံး နယူးယောက်စတော့အိတ်ချိန်းမှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အရောင်းအဝယ်အင်ပါယာကြီးစတင်ခဲ့သည့်အချိန်ကာလကနေ၊ မြှုပ်နှံသူများသည် အောင်မြင်မှု၏ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းပုံရိပ်များဖြင့် ဆွဲဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ သတင်းစာပို့သမားဘဝမှ ဇိမ်ခံပစ္စည်းလျှံနေသော ဘီလျံနာဖြစ်လာသည့် ကိုယ်ပိုင်စတင်ခဲ့သူ၏ ပုံရိပ်ကို ဟောလီးဝုဒ်မှကြော်ငြာလိုက်သည်။
၂၀ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်၊ မီဒီယာသည် မြှုပ်နှံသူများ၊ ရောင်းဝယ်သူများနှင့် အကျိုးဆောင်များကို ချမ်းသာမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် လွှမ်းမိုးမှုကမ္ဘာသို့ တိုက်ရိုက်ဦးတည်စေမည့် လျှို့ဝှက်အသိပညာအချို့ကို ကိုင်ထားသည့် အခွင့်ထူးခံလူတန်းစား အထက်တန်းလွှာအဖြစ် ပုံဖော်ခဲ့သည်။
FBSမှ ပံ့ပိုးထားသော Forex Factory(အလုပ်ရုံ) ရွေးချယ်စရာများသည် သင့်အရောင်းအဝယ် အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်နိုင်ပုံ
Forex ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ဤလူကြိုက်များသည့် အရင်းမြစ်သည်မိတ်ဆက်ရန် အနည်းငယ်လိုအပ်ပေမယ့်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နယ်ပယ်ကို စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေအတွက်၊ Forex Factoryသည် Forex အကြောင်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ အကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာ အရင်းမြစ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ရောင်းဝယ်သူများအား စီးပွားရေးသတင်းများ၊ ဈေးကွက်ဇယားများ၊ ပြက္ခဒိန်နှင့် ဒါပေါ့၊ ဖိုရမ်များ ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။
ရောင်းဝယ်သူများအတွက် ဘာလို့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲ? ပထမဆုံးတော့ ဒါဟာအခမဲ့ပါ။ Forex Factoryသည် များသောအားဖြင့် Forexအကျိုးဆောင်များ၏ ကြော်ငြာနှင့် ထောက်ခံချက်များတွင်သာ တည်တံ့နေသည်။ သူတို့သည် ၎င်းအကြောင်းကို ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုပြီး၊ သူတို့ဝဘ်ဆိုဒ်ရှိ မီဒီယာကဏ္ဍတွင် ကြော်ငြာခများအပါအဝင် အချက်အလက်အားလုံးကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်ကတော့၊ ၎င်းသည် ကျယ်ပြောလှသော ဗဟုသုတ၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ၁၄နှစ်တာလုံး သူတို့သည် Forex နှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် အရာအားလုံးနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး Forex ဗျူဟာများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ သတင်းများနှင့် ဆွေးနွေးချက်များကို စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။
သင်ဘာလို့ သန်းကြွယ်သူဌေး မဖြစ်သေးတာလဲ
အောင်မြင်သော အရောင်းအဝယ်ဆီသွားသည့်လမ်းတွင် အဆင့် ၅ဆင့်အတွက် ဗျူဟာလမ်းညွှန်
လူတိုင်း ကမ္ဘာကြီးကို ကြီးစိုးချင်ကြသည် - (သို့) အနည်းဆုံးတော့ ဘဝကို အပြည့်အဝပျော်ရွှင် ခံစားချင်ကြပြီး၊ မကြာခဏဆိုသလို ငွေလိုအပ်ပါသည်။ Elon Musk သည် အခြားသူများ... ကောင်းပြီ၊ ဒါမျိုးမလုပ်နိုင်သည့်အချိန်တွင်၊ တစ်လစာလခထက် ပိုတန်သည့် ရှန်ပိန်ပုလင်းကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ဖောက်နိုင်သည်။ အပိုဆောင်းဝင်ငွေ အရင်းမြစ်လေးရှာဖို့ လူအများသည် အရောင်းအဝယ်သို့ရောက်လာကြသည်။
Forexသည် ဒဏ္ဍာရီ၊ အယူအဆမှားများနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြင့် ဝိုင်းရံနေသည်။ လူသစ်ရောင်းဝယ်သူများသည် အောင်မြင်သော အရောင်းအဝယ်ဆီသို့ အဆင့် ၅ဆင့်နှင့် သူတို့၏ရှာပုံတော် စတင်ပါသည် - ဗျူဟာလမ်းညွှန်ကို ဖတ်ရှုပြီး၊ ဝင်ငွေရရန် အသင့်ပြင်ထားပါ!
Forex မှာ ဘယ်​လိုစတင်​​ရောင်းဝယ်မလဲ?
Forex အရောင်းအဝယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်ချင်ရင် - သင့်ကိုယ်ပိုင်သူဌေး၊ ငွေကြေးများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ငွေအများအပြားရှာဖွေခြင်းများလုပ်လိုက်ပါ။ ပုံမှန်မေးခွန်းကတော့ "ဘယ်ကနေစရမလဲ?" ပါပဲ။ ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကို ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ အောက်တွင် သင့်အတွက် ငွေကြေးပူပန်စရာမလိုတဲ့ ဘဝကိုရဖို့ဖြတ်လမ်းအနေနဲ့ အဆင့်များစွာကို ရှာတွေ့ပါလိမ့်မည်။ အဆင့်တိုင်းမှာ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ဖော်ပြချက်များပါဝင်တဲ့ လင့်ခ်များ ထည့်ပေးထားတာ ကျေးဇူးပြုပြီး သတိပြုပါ။
၁။ fbs.com တွင် မှတ်ပုံတင်ပါ။
ဒီအဆင့်မှာ အရောင်းအဝယ်အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်တာဖြစ်ပြီး၊ သင့်အကောင့်၏ စကားဝှက်ကို လက်ခံရရှီပါလိမ့်မည်။ အရောင်းအဝယ်အတွက် လိုအပ်မည့် အရင်းအနှီးထည့်သွင်းနိုင်ရန် သင့်ကိုယ်ပိုင်ဧရိယာတစ်ခုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အရောင်းအဝယ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
သင်နှင့်သင့်လျှော်မည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရွေးပိုင်ခွင့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပြီး၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲကာ အကောင့်ထဲသို့ဝင်ပါ။ Forex ဈေးကွက်ကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်မိပါလိမ့်မည်။
၃။ Forex ၏ အခြေခံကို ရှာဖွေပါ။
ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုတာ အတိအကျဆို ဘာလဲ? ဘယ်ငွေကြေးတွေကို ရောင်းဝယ်နိုင်သလဲ? ဘယ်အချိန်မှာ ရောင်းဝယ်နိုင်သလဲ? ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေထားတဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေးတွေကို ပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ်။
၄. သင့်ပထမဆုံးအရောင်းဝယ်ကို စတင်ပါ။
ပထမဆုံး ရောင်းဝယ်ရတဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါ! Forex အရောင်းအဝယ်တစ်ခု ဖွင့်ရန်၊ ပိတ်ရန် အတော်လေးလွယ်ကူကြောင်း သင်ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ရမှာပါ။
၅။ Metatrader အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ
ဤအချက်မှာ အရောင်းအဝယ်နှင့်ပတ်သတ်သမျှ ပိုပြီးအသေးစိတ် စူးစမ်းရှာဖွေပြီး၊ အရေးကြီးတဲ့ အင်္ဂါရပ်များအားလုံးကို လေ့လာပါလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၆။ ဈေးကွက်ကို ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ လေ့လာပါ
အရောင်းအဝယ်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲ လေ့လာပြီးတဲ့နောက်၊ ဘယ်အရောင်းအဝယ်ကို ဖွင့်ရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပြီး - အရောင်း (သို့) အဝယ် လုပ်ရန်၊ စီးပွားရေးသတင်းတွေကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ဈေးကွက်ဇယားကို ဘယ်လို "ဖတ်"ရမလဲ လေ့လာပါ။
၇။ ဆုံးရှုံးနစ်နာနိုင်ခြေများကို ထိန်းချုပ်ပါ။
အစကတည်းက အန္တရာယ်ကြုံရနိုင်ခြေများကို ကန့်သတ်ပြီး၊ အမြတ်အစွန်းရနိုင်ခြေများကို တိုးထားပါ။
ဒီအဆင့်တွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးရင်တော့ Forex ရောင်းဝယ်ခြင်းမှာ ကောင်းသောစတင်ခြင်းရရှိပါလိမ့်မည်။ သင့်အောင်မြင်မှုဟာ သင်ဘယ်လောက် ထက်မြက်ပြီး၊ ရည်မှန်းချက်ကြီးလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ သင်ယူ၊ လေ့လာပြီး အရောင်းအဝယ်တိုင်းမှာ ပိုတော်လာတဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပါ!
ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာတော့ လိုအပ်တဲ့အကူအညီမှန်သမျှ ထောက်ပံ့ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပုံမှန် အင်တာနက်မှ သင်ကြားခြင်း မှာ အခမဲ့ ပါဝင်ပြီး၊ Forex ပညာရှင်များထံမှ တိုက်ရိုက်သင်ယူပါ!
FOREX နှင့် မိန်းမပျို၊ အဆင့် ၁
FBSမှ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်: သူ့ဘဝမှာ တစ်မိနစ်လောက်တောင်မှ အရောင်းအဝယ်မလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးက Forexမှာ ငွေရှာချင်တယ်ဆိုရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စူးစမ်းနေမိကြပါတယ်?
မစ္စအန်းမှ ဒီစမ်းသပ်ချက်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပြီး၊ အပိုဆုဒေါ်လာ ၅၀နဲ့ ဒေါ်လာ ၁၁၃လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပြောတာကတော့ လူသစ်တွေက ကံကောင်းတယ်တဲ့။ မစ္စအန်းက ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကို လူသစ်အနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုကို စောင့်ကြည့်ရအောင်။ ပထမလူဆီက စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုဖတ်ရှုပါ!
မင်္ဂလာပါ! ကျွန်မနာမည်ကတော့ Annပါ။ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်မျိုးမှာ ပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၃၄နှစ်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မလို မိန်းကလေးတစ်ဦးက Forex မှာငွေရှာနိုင်ပါ့မလား ဒါမှမဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးဂုရုကြီးတွေအားလုံးဆီကနေ အရမ်းဝေးကွာလွန်းနေမလား?
Nassim Taleb - ထူးချွှန် သချာင်္ပညာရှင်၊ ထရိတ်ဒါ။
Nassim Nicholas Taleb ဟာ ပြောင်မြောက်တဲ့ ခေတ်မှီတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ တခြားသူတွေလုံးဝမလုပ်ဖူးတဲ့ သို့မဟုတ် လုံးဝမလုပ်ရဲတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ အမြတ်များစွာရှာဖွေခဲ့ရတာကြောင့် တစ်ချက်လောက် လေ့လာကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ဒီဘောကြော့သူဌေးကိုတော့ ၁၉၆၀ခုနှစ် လစ်ဘနွန်နိုင်ငံ အမီအွန်မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကုဆရာဝန်နဲ့ မနုဿဗေဒဘာသာရပ်သုတေသီ ဒေါက်တာ Najib Taleb နဲ့ သူ့ဇနီး Minerva Ghosn တို့ရဲ့ သားဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မိသားစုဟာ ချမ်းသာပြီး သြဇာရှိတဲ့ ဂရိ အောသိုဒေါက်ဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနိုင်ငံထဲမှာတော့ ထိုဘာသာဟာ အနည်းစုပဲရှိပါတယ်။ သူ၏အဘိုး နဲ့ အဘေး တို့ဟာ ဒုဝန်ကြီးချုပ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ ငါးဆက်မြောက် အဘိုး (ဘောင်) ဟာ Ottoman Mount Lebanon ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Taleb ဟာ သူရဲ့ bachelor ဘွဲ့နဲ့ မာစတာဘွဲ့ကို ပဲရစ် တက္ကသိုလ်မှ ယူခဲ့ပါတယ်။ MBA ဘွဲ့ကို Pennsylvania တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ Wharton ကျောင်းကနေယူခဲ့ပြီး Hélyette Geman ရဲ့ညွန်ကြားမှုအောက်ကနေ သိပ္ပံဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု PHD ကို ပဲရစ်တက္ကသိုလ် (Dauphine) မှ ယူခဲ့ပါတယ်။ (သူရဲ့ Thesis စာတမ်းကတော့ derivatives ဈေးနှုန်း သင်္ချာပါ)။
သူဟာ ထရိတ်ဒါအနေနဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး အတွက်အချက်ဖြင့်စာရင်းစစ်ပေးသူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ စာရင်းဇယားတွေကို လေ့လာလိုက်စားလေ ဘဏ္ဌာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ပေါက်ကွဲတော့မယ် ဒိုင်းနမိုင်းစည်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ သူဟာယုံကြည်လေလေဖြစ်ပါတယ်။
Fooled By Randomness စာအုပ်နဲ့ The Black Swan စာအုပ်တွေရေးသားခြင်းကြောင့် သူ့ကို လူသိများလာပါတယ်။ ထိုစာတွေက ဘဏ္ဌာရေးစံပုံစံဆိုင်ရာ သမာရိုးကျအမြင်တွေနဲ့ ထိုဘဏ္ဌာရေးစနစ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ သင်္ချာပညာဆိုင်ရာ စာရင်းတွက်ချက်မှုတွေကို စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၀ခုနှစ်မှာ Nassim Taleb ဟာ options ဈေးကွက်ပြုလုပ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ customer အ၀င်အထွက်နှုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ထိုအလုပ်နဲ့ သူဟာငွေရှာခဲ့ပါတယ်။ သူက options တွေကို ၀ယ်တဲ့ဈေးနှုန်းထက် နည်းနည်းလေးပိုပြီးရောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အော်ဒါတွေကို အညီအမျှဖြစ်သွားအောာင် စောင့်မျှော်ပါတယ်။ ထိုမှ သူဟာ net မျှခြေ position ကို ရမှာပါ။ သူက Net position ကိုပြုလုပ်ချင်ပါက သူရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မျှခြေသဘောဖြစ်စေရန် အညီအမျှပြောင်းပါတယ်။
Nassim ဟာ အကျိုးအမြတ်ကောင်းကောင်းရှာနိုင်ခဲ့တဲ့ ထရိတ်ဒါတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ အချီကြီးလုပ်ဆောင်မှုတွေက စတော့ဈေးကွက်ပျက်တဲ့ ၁၉၈၇ အောက်တိုဘာ ၁၉ရက်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ တန်ကြေးလုံးဝ မရှိခါနီး ဖြစ်နေတဲ့ out-of-the-money ယူရိုဒေါ်လာ future put ကနေ position ကြီးကြီးမားမားစုမိခဲ့ပါတယ်။ ယူရိုဒေါ်လာ future ဈေးကွက်ဟာ ဘဏ်တိုးသုံးလနဲ့ တစ်ပွိုင့်ရွေ့တိုင်း ၂၅ ဒေါ်လာပေးတဲ့ bet ရင်းနှီးမှုဖြစ်ပါတယ် (ဥပမာ ၇.၅% မှ ၇.၅၁%)။ တစ်ကယ့်နေ့ကြီးက ၁၀ ပွိုင့်အရွေ့၊ စာချုပ်တစ်ခု ၂၅၀ ဒေါ်လာ ဖြစ်တဲ့အခါပါ။ ၁၉၈၇ အောက်တိုဘာ ၁၉ရက်နေ့မှာ အရွေ့က ၁၀ဆဖြစ်သွားပြီး၊ စာချုပ်တစ်ခုတန်ကြေးက ၂၅၀၀ ဒေါ်လာဖြစ်သွားပါတယ် (၇.၅% ကနေ ၈.၅%ဖြစ်သွားတာပါ)။
out-of-the-money put (ထိုဟာက အတိုးနှုန်းတက်ရင် အကျိုးအမြတ်ဖန်တီးပေးပါတယ်) မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ အတက်အကျဟာ တော်တော်များပါတယ်။ အတိုးနှုန်းက ၇.၅ဖြစ်တဲ့အခါ ၈% မှာရှိတဲ့ ရေတို put ကို ၁၀၀ ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတိုးနှုန်းက ၈.၅% ထိတက်သွားတဲ့အခါ ၁၅၀၀ ဒေါ်လာလောက် တန်ကြေးရှိသွားပါမယ်။
Nassim က ထို Put တွေကို များများကိုင်ထားပြီး ၃၅ မီလျှံလောက်အမြတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဈေးကွက်မှာ သူ့အတွက်အကြီးမားဆုံး အောင်မြင်မှုပါ။ သူက ဒါဟာ ကံကောင်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကံကောင်းခြင်းက ၅ နှစ်လောက် ဆက်တိုက်ကုန်းရုန်းလုပ်ကိုင်ခဲ့တာထက်ကို ပိုတန်ကြေးရှိနေတယ်လို့ သူ့အတွက်တွေးထင်ခဲ့စရာပါ။
လူများဟာ ပိုက်ဆံများများစားစားရှိမှ အကျိုးမြတ်မြတ်များများရှိနိုင်မဲ့၊ အန္တရာယ်ရှိလှတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ငွေနည်းနည်းနဲ့လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေကို ဒေ၀ါလီခံရလောက်တဲ့ ဗျူဟာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်မယ် ပြီးတော့ ကံက အရေးပါတယ်လို့ တချို့တွေကပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုအချက်တွေက Nassim Taleb ဟာထူးချွန်တဲ့ ထရိတ်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ မပယ်ဖျက်နိုင်ပါဘူး။
Taleb ရဲ့ အကျော်ကြားဆုံး ခန့်မှန်းမှုကြီးများ
၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ အစိုးရထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ Fannie Mae အဖွဲ့အစည်းကြီး ပြိုလဲမှုကြီးဖြစ်နိုင်ခြေ အများကြီးရှိတယ်လို့ Taleb ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ Fannie Mae ကို အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်မှာ စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပါက ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ယူစဉ်မှာဘဲ Taleb ဟာ ထို စွန့်စားမှုကို ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ပြီး အကောင်းမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုဟာကို ကျွတ်ထိုးမှုလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့ ပေါက်ကွဲမဲ့ ဒိုင်းနမိုင်း စည်ကြီးပေါ်မှာ ထိုင်နေရတာနဲ့ တူတယ်လို့ ယှဉ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ထိုခန့်မှန်းချက်က လူတွေကြားထဲ အုံးအုံးကျက်ကျက်ဖြစ်သွားပြီး ဘဏ္ဌာရေးလောကမှာ ဝေဖန်မှုတွေ ပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုခန့်မှန်းချက်ဟာ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ Fannie Mae ပြိုကျမှုကြီးဟာ US အခွန်ထမ်းပြည်သူတွေကို ရာချီတဲ့ ဘီလျှံဒေါ်လာတွေ ဆုံးရှုံးစေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် Black Monday မှာ Dow Jones Industrial Average က ၂၂.၆% ကျသွားတဲ့အခါ Taleb ဟာ အမြတ် ဒေါ်လာ ၄၀ မီလျှံလောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သမိုင်းမှာတော့ဒါဟာ စံချိန်တင် ကျဆင်းမှုပါ။ Taleb ကလွဲရင် မည်သူမဆို ထိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်မှာကို ကြိုစဉ်းစားခဲ့သင့်တယ်လို စိတ်ကူးယဉ်ကြမှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ထိုဟာကို Black Swan (ငန်းမည်း) ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်လိုက်ကြပါတယ်။
သူရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေထဲမှာ အခိုင်အမာပြောထားတာက တတိယကမ္ဘာစစ်ဆိုတာ လက်ရှိအချိန်မှာ ကြောက်ဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ စစ်ဖြစ်ဖို့အင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေက တခြားနိုင်ငံကိုအသုံးချပြီး ဖြစ်ဖို့သာ ဆန္ဒရှိကြတယ်ဆိုတာကြောင့်ပါတဲ့။ အနောက်နဲ့ တရုတ် သို့မဟုတ် အနောက်နဲ့ အစ္စလာမ်တို့ကြားမှာရှိတဲ့ ငန်းမည်း ရင်ဆိုင်မှု အကြောင်းကိုသူပြောပါတယ်။
ဒါဆို Nassim Taleb ရဲ့ ထရိတ်ဒင်းနည်းဗျူဟာကဘာလဲ။
စီးပွားရေးသမားဆိုတာထက် ကြုံရာကျပန်းဖြစ်ပေါ်မှု သုတေသီအဖြစ် Taleb က သူ့ကိုသူ ခေါ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ထရိတ်ဒင်းကိုအသုံးပြုပြီး အာဏာပိုင်တွေလက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်မှုရှိအောင် လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၁။ Taleb က အခက်ခဲဆုံး ခန့်မှန်းမှုတွေ (ငန်းမည်းတွေ) မှာ စွန့်စားမှုတွေလုပ်ပါတယ်။
သူဟာ ငန်းမည်းတွေကို ခန့်မှန်းရခက်ခဲပြီး ရှားပါးဖြစ်ရပ်တွေ အနေနဲ့ ပြောပါတယ်။ ထိုဖြစ်ရပ်တွေရဲ့ ကောင်းဆိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ စနစ်တစ်လုံးပေါ် အားကောင်းကောင်းသက်ရောက်မှုရှိမှုတွေကို လည်းခန့်မှန်းပါတယ်။
၂။ အနုတ်သဘောဆောင်တဲ့ ငန်းမည်းတွေကြောင့်ဖြစ်လာမယ့် ဆုံးရှုံးမှုတွေမရှိအောင် သူရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။
Taleb ဟာ (ငန်းမည်း ကာကွယ်ရေးလို့ အခုခေါ်တဲ့) tail risk hedging ရဲ့ စွန့်ဦးရှာသူဖွေသူတစ်ဦးပါ။ ထိုဟာနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဈေးကွက်အရွေ့ကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ dividend တွေကို သူ့မှာရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ သိမ်းယူခြင်းက Extremistan အစား Mediocristan နေရာမှာပဲ နေခြင်းကို ဆိုလိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Mediocristan တွေဆိုတာ အရင်ရှိခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေအပေါ်ကနေ ခန့်မှန်းလို့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုပြောတာပါ။ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ လူတွေကနေ အယောက် ၁၀၀၀ ကိုရွေးပါ။ အာဖရိကန် နဲ့ ချက်ကီလူမျိုးတွေ၊ ကမ္ဘာ့ အ၀ဆုံးသူ နဲ့ တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်။ ပျမ်းမျှတန်ဖိုး (မျက်လုံး ၂လုံး၊ ပျမ်းမျှအလေးချိန်၊ ခြေ ၂ချောင်း လက်၂ ချောင်းနဲ့ တခြားအရာ) တွေက ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့ လူတစ်စုကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ တန်ဖိုးကိုပြောပါလိမ့်မယ်။ အ၀ဆုံးလူတစ်ယောက်ပါရင်တောင် ပျမ်းမျှယူလိုက်တဲ့အခါမှာ ပြောင်းလဲမှု ကြီးကြီးမားမားမဖြစ်စေပါဘူး။
Extremistan က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်တဲ့ လူမှုရေး နိယာမတစ်ခုကိုဖော်ပြပါတယ်။ လူအယောက် ၁၀၀၀ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုယူကြည့်ပါ။ ဒီ လူအစုထဲမှာ ဘေလ်ဂိတ်ကိုထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးမှာ ဘီဂိတ်ရဲ့အချိုးက ၉၉.၉၉% ဖြစ်နေပါမယ်။ အယောက် ၁၀၀၀ ရဲ့ပျမ်းမျှတန်ဖိုးက ဘာမှမဟုတ်သလိုဖြစ်သွားမှာပါ။ "Extremistan မှာဆို မညီမျှမှုက အရမ်းကိုကြီးပြီး တစ်ခုသောအရာက ကြီးမားလှတဲ့ အချိုးမကျမှုနဲ့ များပြားလှတဲ့ တိုးတက်မှုဖြစ်စေတယ်"လို့ Taleb က ဆိုပါတယ်။
၃။ Taleb က အမြတ်ရမဲ့ပမာဏနဲ့ အများဆုံးချန်ထားရမဲ့ fund ငွေ ကြားမှာရှိတဲ့ စွန့်စားမှုတွေကို ထိန်းညှိပါတယ်။
ထရိတ်ဒါတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူရဲ့ထရိတ်ဒင်းနည်းဗျူဟာက ရှားပါးဖြစ်ရပ်တွေ (ငန်းမည်း) ကနေ အကျိုးမြတ်ရယူုခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို အခက်အခဲတွေကနေ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါတယ်။
၄။ သူကိုင်ရတာကြိုက်တဲ့ အခြေခံအကျဆုံး position ကတော့ at-the-money options ရောင်းရခြင်းနဲ့ out-of-the-money options ၀ယ်ယူရခြင်းပါ။ နှစ်ခုစလုံးက put and call တွေပါ။
အတွေးအခေါ်ကတော့ဒီလိုပါ။ ပုံမှန်ရွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို လူတွေကလျှော့တွက်တယ်ဆိုတာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် စနစ်တကျနဲ့ ကြီးကြီးမားမားအရာကြီးတစ်ခုဖြစ်မယ် သို့မဟုတ် ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကို စွန့်စားပြီး အကျိုးအမြတ်ရှာဖွေတာပါ။
သူ့ရဲ့စာအုပ် Dynamic Hedging က လက်တွေ့အသုံးချသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ options နဲ့ထရိတ်ခြင်းအကြောင်းကို ရေးသားထားပါတယ်။ ထရိတ်ဒါက ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ထရိတ်ဒင်း ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို နားလည်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာလဲကောင်းကောင်းသိရမယ်ဆိုပါတယ်။ နောက် edge အစွန်းဘက်ကျနေတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်ရှာရမယ်ဆိုတာကို သိရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
၅။ Taleb ရဲ့ နည်းဗျူဟာက ဘယ်အယူအဆပေါ်အခြေခံလဲဆိုတော့ တချို့ options တွေကို စနစ်တကျ ဈေးနှုန်းမှားပြီးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတာ အခြေခံတာပါ။ အကြောင်းကတော့ ဈေးကွက်တစ်ဖန်ပြန်ဝင်ရောက်ခြင်းရဲ့ fat-tailedness ဖြစ်တန်စွမ်း ဖြန့်ဝေမှု ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီနည်းဗျူဟာကိုအသုံးချမယ်ဆို နှစ်အကြာကြီးရှုံးနေတယ်လို့ သင်ခံစားရတဲ့အခါတိုင်း စိတ်ပိုင်းကော ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကော တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်နေဖို့ ပြင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အနိုင်တစ်ချက်ထဲနဲ့ အကုန်ကျုံးသိမ်းဖို့ဆို ဒီလိုလုပ်ရတာ လုံလောက်နေပါပြီ။
ဒီနည်းလမ်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ မှာ အကြိမ်များစွာ အသုံးချခြင်းနဲ့ အကျိုးအမြတ်များ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း Taleb ပြောပါတယ်။ ဒီနည်းဗျူဟာက ကြီးမားတဲ့ ဈေးကွက်အရွေ့မှာဆို အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒါဆို သင်ဘာလို့ တစ်ခါလောက်စမ်းမကြည့်တာလဲ။
မိန်းမပျိုနှင့် Forex. အဆင့် ၃
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်မရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ခုထိစိတ်ဝင်စားနေသေးတာ မြင်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်! ဒီဇာတ်လမ်းအစကို မသိသေးဘူးဆိုရင်၊ ပထမ နှင့် ဒုတိယ ပိုင်းကို ဒီမှာဖတ်ပါ။
FBS သုံးသပ်သူများထံမှ အကူညီမတောင်းပဲ ကျွန်မဘာသာရောင်းဝယ်ရန် လေ့လာခဲ့ပါတယ်
ကျွန်မရဲ့အရောင်းအဝယ်မှတ်တမ်းမှာ ကြုံခဲ့ရသမျှ အခက်အခဲများအားလုံးကို ဖော်ပြထားပါတယ်
FBS သုံးသပ်သူများမှ နောက်တစ်ခါဘယ်လိုအတွဲမျိုးကို ရောင်းဝယ်သင့်လဲဆိုတာ ပြောပြပါတယ်
ကျွန်မအိမ်စာကတော့ ဈေးလမ်းကြောင်း မျဉ်းတန်းများနှင့် support နှင့် resistance မျဉ်းများကိုလည်း လေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
သုံးခဲ့သည့်အချိန်: အရောင်းအဝယ် ကာလ ၃ရက် (သီအိုရီအတွက် ၂နာရီနှင့် နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရန် ၂နာရီ)
အကောင့် လက်ကျန်ငွေ အရောင်းအဝယ် ကာလ $၁၄၂၏ အစမှ စတင်
လက်ရှိကာလမှာ အကောင့်လက်ကျန်ငွေ: $၂၁၈,၅၃
ဒီမှာ ဈေးလမ်းကြောင်း မျဉ်းတန်းနှင့် support/resistance မျဉ်းများကို အောင်မြင်စွာအသုံးချနိုင်ကြောင်း အရမ်းအားကျစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့၊ အရာများက မတူညီကြပါဘူး:
Bitcoin အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာများ
အကယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ မရှိခဲ့ပါမူ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ကတော့ ဒါတွေကို တီထွင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်တော့၊ Bitcoin ဈေးနှုန်း၏ နေ့စဉ်အပြောင်းအလဲများသည် EUR/USD, USD/JPY နှင့် အခြားအဓိကအတွဲများကဲ့သို့သော ငွေကြေးအတွဲများထက် ပိုကြီးလေ့ရှိပါသည်။ Bitcoin၏ ဈေးနှုန်း လှုပ်ရှားမှုကြီးလျှင်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပိုအမြတ်ရနိုင်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
မိနစ် ၃၀အတွင်း ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
နောက်ဆုံးရ FBS ဇာတ်ကြောင်းများကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ
သင့်လိပ်စာ ချန်ထားခဲ့သည်နှင့် ကျွန်တော်တို့ထံမှ အီးမေးလ်များ လက်ခံရယူရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့ပေမယ့် သတင်းရယူမှုကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။